भिम रावल ओली क्याम्पमा प्रवेश , बने एमालेको दोस्रो अध्यक्ष ! - Rising Dainik
भिम रावल ओली क्याम्पमा प्रवेश , बने एमालेको दोस्रो अध्यक्ष !
July 22, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on भिम रावल ओली क्याम्पमा प्रवेश , बने एमालेको दोस्रो अध्यक्ष !
काठमाडौँ / नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष भीम रावललाई फोन गरेर माधव नेपाल पक्षको बैठकमा नजान आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनुभन्दा केहीबेर अघिमात्रै सांसद् पदबाट राजीनामा दिएका थिए । संसद् बैठक सुरु नहुँदै रावलले माधव नेपाललाई भेटेर देउवाको विपक्षमा मत दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
ओलीभन्दा माधव पक्ष शक्तिशाली म प्रेम आलेले फेरी १५ सांसद ल्याए ! को-को आए ?
सडकमा बाँदर कुदाएर एकता हुँदैन , छुटै पार्टी भइसक्यो : माधव नेपाल
मानिस होस् वा पशु जो कोही आमा आफ्ना सन्तान बचाउन आफैलाई बाजी थाप्छिन्.,यो सन्देशको भिडियोले संसारलाई रु’वायो
केपी ओलीले देव गुरूङलाई हटाए, प्रमुख सचेतकमा भट्टराई नियुक्त
हरिबोल गजुरेल एमालेमा जाने सूचना आएपछि उ’ड्यो प्रचण्डको होस् !